Kedu ihe igwe na-ere ahịa Wave na-eme? | Neoden
I. Igwe na-ere ahịa Wave Ụdị
1.Igwe na-ere obere ebili mmiri
Microcomputer imewe na tumadi etinyere na nkà mmụta sayensị nnyocha institutes, ụlọ akwụkwọ na ndị ọzọ R & D ngalaba, imeghari ka akporo mmepụta bụ a dịgasị iche iche nke obere ogbe, miniaturized ọhụrụ ngwaahịa nnwale mmepụta, adịghị mkpa ofu rụọ.
Atụmatụ: Obosara ebili mmiri na-abụkarị ihe karịrị 200mm, olu tankị igwe anaghị agafe 50KG, obere ma mara mma, obere akara ukwu, dị mfe ijikwa, dị mfe iji rụọ ọrụ, enyi nwoke-igwe interface, mmejọ nnabata.
2. Obere igwe na-ere igwe
Ngwa ngwa nke obere ịgbado ọkụ ebili mmiri bụ ọkara na obere ngalaba mmepụta na ngalaba nyocha sayensị. Ọ na-anabata ọnọdụ nnyefe kwụ ọtọ, arụmọrụ dị elu, obosara nke ebili mmiri na-abụkarị ihe na-erughị 300mm, oghere na-ere ahịa nwere ikike ọkara, sistemụ arụmọrụ dị mgbagwoju anya karịa microcomputer, udi ahụ dịkwa ukwuu karịa microcomputer, nwere ike ịbụ desktọpụ, nwere ike. bụrụkwa ụdị ala. Site n'echiche nke onye ọrụ, ọtụtụ ngalaba nyocha sayensị dị njikere ịhọrọ ụdị igwe a iji dochie microcomputer, ka ha wee nweta ohere nhọrọ buru ibu na ngwa ngwa.
3. Igwe na-ere igwe na-efe efe nke etiti
A na-etinye igwe na-ere igwe na-efegharị ọkụ na ọkara na nnukwu - ngalaba mmepụta olu na ụlọ ọrụ.
Atụmatụ: ihe nlereanya bụ nnukwu, n'ozuzu okirikiri nhọrọ ukwuu bụ kabinet Ọdịdị, na-emekarị ife obosara bụ karịa 300mm, solder uzo ike karịrị 200kg (otu ife igwe) ma ọ bụ 250kg (okpukpu abụọ igwe), nke kasị ibu ruo 00kqg. Nabata ụdị etiti ma ọ bụ claw ụdị ogologo ahịrị clamping mode, ọrụ ahụ zuru oke, ịgbachi ngwa ngwa ngwa ngwa, arụmọrụ arụmọrụ dị elu, enwere ọtụtụ ngwa maka onye ọrụ ịhọrọ, yana n'ihu na azụ ahịrị ahụ dakọtara dị mma.
4. Nnukwu igwe ire ere
Emebere isi n'isi maka mkpa ndị ọrụ dị elu. Ihe njiri mara ya bụ iji teknụzụ teknụzụ ọgbara ọhụrụ na teknụzụ ịgbado ọkụ nke mmezu kachasị ọhụrụ, nchụso ọrụ zuru oke, arụmọrụ dị elu, njikwa ọgụgụ isi na nkwalite usoro. Ngwá ọrụ dị otú ahụ dị oke ọnụ, nlekọta dị mgbagwoju anya, ịdị mma ịgbado ọkụ, arụmọrụ dị elu na nnukwu ikike, ya mere ọ dị mma maka mmepụta ihe.
ND 250 igwe na-agbagharị ifegharị
II. Nlekọta igwe na-ere ebili mmiri
Ọdịnaya na-edozi ihe na-ere ọkụ n'ime awa 4 ọ bụla:
1. Hichaa tin slag n'etiti ebili mmiri abụọ.
2. na brush aka tinye n'ime mmanya ga rosin nozzle brush dị ọcha;
Mara: Mgbe ị na-eme usoro a, gbaa mbọ hụ na a na-ebufe PCB dị n'agbụ.
Ọdịnaya mmezi kwa ụbọchị nke igwe na-ebufe mmiri:
1. Kpochapụ ihe fọdụrụ n'ime ọdọ mmiri, jiri ngaji tin chịkọta ihe niile fọdụrụnụ n'elu tin, ma gbakwunye mbelata ntụ ntụ iji belata akụkụ nke gbajiri agbajiri agbaji; Mgbe ịmechara usoro ndị a dị n'elu, tinyeghachi stovu tin ahụ n'ọnọdụ ya.
2. na akwa na-etinye n'ime mmiri iko iji hichaa ime na n'èzí nke iko nchebe.
3. a ga-eji brush aka tinye n'ime mmanya na-egbu egbu iji hichaa unyi dị n'ụkwụ, a ga-eji osisi bamboo zoo n'ime eriri na oji n'etiti unyi dị ọcha.
4. Wepu ihuenyo nzacha n'ime mkpuchi ikuku na-agbapụta ma kpochaa ya na mmanya.